Qalalaaso siyaasadeed oo wali ka taagan dalka Sudan – Bandhiga
Qalalaaso siyaasadeed oo wali ka taagan dalka Sudan
Waxaa wali sii soconaya rabshadaha ka taagan dalka Sudan iyadoo taagerayaal kubada cagta ah iyo ciidanka amniga suudaan ayaa isku dhaceen kadib markii ay ku hadaaqeen erayo liddi ku ah madaxweyne Cumar Xasan Al Bashiir.
Muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay taagerayaasha oo ku sugan garoonka kuna dhawaaqaya waxaan dooneynaa in la badalo xukuumada.
Shaqsiyaadka u ololeeya arimaha bulshada ayaa sheegay in booliska ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa kadib markii ay dhamaatay cayaarta.
Isku dhacaan ayaa qeyb ka ah dibadbaxayda balaaran oo maalinkii lixaad looga soo horjeedo sicir bararka iyo shaqa la,aanta ka jirta dalka suudaan.
Wararkii ugu dambeeyayna waxey sheegayaan in Dhakhaariirta dalkaasi ay ku dhawaaqeen shaqo joojin taa oo xaaladda sii cakireysa, wararka qaar ayaa sheegaya in Imaaradka Carabta uu ka dambeeyo kicinta dadka.
Cumar xasan Al-Bashiir oo talada qabtay sanadkii 1989 ayaa ilaa iyo hada waxaa uu maamulayaa wadanka suudaan waxaana sanadihii danbe sii xoogeysanayay mucaarada uu kala kulmayo siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah shacabka suudaan.